नयाँ पुस्ता Archives - Naya Pusta
Home > नयाँ पुस्ता
जाडोमा हुने सुख्खा र रुखो छालालाई यसरी बनाउ मुलायम
Naya Pusta २०७५ माघ ३ टिप्स, नयाँ पुस्ता
चिसो बढेसँगै छाला सुख्खा हुन थाल्छ । छालाको नरमपना तथा चमक हराउन थाल्छ । जसले गर्दा धेरैको हातखुट्टा फुट्ने, हात खुट्टाको छालामा चिरा पर्ने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । त्यसैले, चिसोमा छालाको विशेष ध्यान राख्न पनि यी उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ। मोइस्चराईजर क्रिमका प्रयोग मौसम अनुसार मोइस्चराईजर क्रिम पनि बेलाबेलामा बदलिरहनु
Naya Pusta २०७५ माघ २ टिप्स, नयाँ पुस्ता
लुगा त थरीथरीको लगाइन्छ, तर आफैलाई सुहाएको जस्तो लाग्दैन । ज्यान भद्दा भएर हो वा लुगा नमिलेर ? भेउ पाउन सकिदैन । आफैलाई आफ्नो पहिरन असुहाउँदो लागेपछि हिनताबोध हुन्छ । आत्माविश्वास हराउँछ । ‘अरुले केही भन्लान् कि ?’ यस्तो आशंकाले मनमा ग्लानी पैदा हुन्छ । भनौं, असुहाउँदो पहिरनले मानसिक तनाव दिन्छ
आज काठमाडौंमा सबैभन्दा जाडो, शून्य डिग्री सेल्सियसमा झर्‍यो तापक्रम
Naya Pusta २०७५ पुष १६ December 31, 2018 Special News, नयाँ पुस्ता, समाज
काठमाडौं । सोमबार काठमाडौं उपत्यकाको न्युनतम तापक्रम शून्य डिग्री आसपासमा पुगेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखको रेकर्ड अनुसार सोमबार बिहान पौने नौ बजे उपत्यकाको तापक्रम यो वर्षको सबैभन्दा कम ०.५ डिग्री सेल्सियस न्युनतम तापक्रम मापन गरिएको छ । ‘जाडोको समयमा आकाश लामो समयसम्म खुल्ला रहँदा पनि तापक्रम घट्ने
Naya Pusta २०७५ पुष १० December 25, 2018 Special News, नयाँ पुस्ता, पर्यटन, प्रदेश नम्बर ४
नयाँ पुस्ता बिशेष : गोविन्द मरासिनी/काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको (प्रदेश नं ४) राजधानीसँग सिमाना जोडिएको पर्यटकीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट प्रचुर सम्भावना बोकेको एक जिल्ला हो स्याङ्जा । पोखराबाट सवारीमा करिब १ घण्टाको यात्रा पश्चात रमणीय र पर्यटकीय स्याङ्जा जिल्ला पुगिन्छ । स्याङ्जा जिल्लामा रहेका विविध पर्यटकीय स्थान र धार्मिक स्थलहरुले स्याङजा पुग्ने
आहा ! मनमोहक तिलिचो कसरी पुग्ने ? (फोटो कथा)
Naya Pusta २०७५ मंसिर २३ December 9, 2018 Photo News, Samachar, Special News, नयाँ पुस्ता, पर्यटन
लोकराज भण्डारी मनाङ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल नेपालको मनाङ जिल्लामा पर्दछ । हिमालय पर्वत श्रृखला अन्र्तगत अन्नपुर्ण क्षेत्रभित्र पर्ने यो ताल समुन्द्री सतहदेखी ४९१९ मिटरको उचाईमा रहेको छ । यसको लम्बाई ४ किलोमिटर र चौडाई १.२ किलोमिर र गहिराई सरदर २०० मिटर रहेको छ । ताल वरिपरि मुक्तिनाथ,
Naya Pusta २०७५ मंसिर १८ Samachar, नयाँ पुस्ता
काठमाडौं । युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने कलेज भर्ना भएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित बनेका लामिछाने बौद्धस्थित जेभियर इन्टरनेसनल कलेजमा मंगलबार बिहान आफैं पुगेर भर्ना फारम भरेका थिए । कलेजका अनुसार सन्दीप मानविकी संकाय अन्तरगत बीएसडब्लु (ब्याचलर इन सोसल वर्क) मा भर्ना भएका हुन् । उनलाई तीन वर्षे कोर्सका लागि पूर्ण
Naya Pusta २०७५ कार्तिक २५ Special News, नयाँ पुस्ता, राजनीति
कञ्चनपुर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका अभिभावकले आइतबारदेखि धर्ना सुरु गरेका छन् । छोरीको हत्या भएको १ सय ९ दिन हुँदा पनि दोषीलाई कार्वाही नभएकाले दोषीलाई कार्वाहीको माग गर्दै निर्मलाका परिवारले अनिश्चितकालीन धर्ना बस्ने निर्णय गरेका हुन् । आइतबार बिहान ११ बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको कार्यालय अगाडि धर्ना
Naya Pusta २०७५ कार्तिक १९ November 5, 2018 नयाँ पुस्ता, समाज
काठमाडौं । नेपाली कला र संस्कृतिलाई विश्वमा चिनाउने उद्देश्यले धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका मुर्तिढुङ्गा–९ मा जन्मिएकी १७ वर्षीया बन्दना नेपालले ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’ को लागि १ सय २६ घण्टा लगातार नृत्य गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बन्दनाले १ सय २६ घण्टा लगातार नृत्य
भक्तपुरमा अपाङ्ग बालिका बलात्कृत, संलग्नको आरोपमा ७० वर्षीया दुई वृद्ध पक्राउ
Naya Pusta २०७५ कार्तिक १३ नयाँ पुस्ता, समाज
भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण–४, संगममा भिन्न क्षमता भएकी १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छन् । स्थानीय दुई वृद्धले उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको हुन् । बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा स्थानीय ७० वर्षीया श्यामबहादुर मिजार र घेटेरो सार्की रहेका छन् ।
Naya Pusta २०७५ आश्विन १५ नयाँ पुस्ता, प्रवास, विचार
सगर रोक्का/लण्डन । बेलायती डायस्पोरामा समाचार चोरीको बिषय यो साता नेपाली पत्रकारवीच चर्चाको बिषय बन्यो । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङको समाचार अर्काका सारेको झोकमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालले सबै पत्रकारलाई चोर भनेपछि बहसको बिषय बनेको हो । बिषय प्रवेश बेलायतमा नेपाली पत्रकारिताको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक